Uluhambisa njani Amehlo uLwimi loMzimba loThando - Ukuthandana Tips
Uluhambisa njani Amehlo uLwimi loMzimba loThando
Konke malunga namehlo. Banokumema, bafudumale, babe ngumkhenkce kwaye bathandane. Ngaba uyazi ukuba uphawu lokujonga ngamehlo? Funda ngendlela umntu ajonga ngayo xa ekuthanda, kwaye oko kukuqhwanyaza okukhawulezayo okanye ukuqhwanyaza kunokumela ntoni.
ILwimi loMzimba loLwimi loThando: Ukwazi ukuba ngaba uneKrush
Njengoko intetho isithi, 'Amehlo asefestileni emphefumlweni.' Kukho into ethuthuzela kakhulu ngokujonga emehlweni omntu okuthandayo kuba amehlo ashushu kwaye amkelekile. Xa usenza isigqibo sokuba umntu uyakuthanda ngokujonga amehlo akhe, kuya kufuneka uyazi ukuba ujonge ntoni. Sukuba nexhala ukuba emva kokufunda ezi zikhokelo awukhumbuli amandla akhotyumzaubabonise, kusenokufuneka uhlawule nje kancinci ukusukelaulwimi lomzimba wamehlokunokuba lula ukuyiphosa. Eminye imizekelo yendlela yokufunda amehlo othando yile:
yenza itemplate yakho yomdlalo webhodi
Ukukrwaqula ngokukhawuleza nguimpawu zomzimbangamehlo; Umtsalane yinto enokuyithetha.
Ukuba umntu othile unothando kuwe kwaye akazithembanga, unokuqaphela ukungabikho komntu ojongana naye emehlweni.
Ukuqwayita kungathetha ukuba umntu othile uzama ukukwazisa ukuba unomdla kuwe.
Ukudibana kakhulu kwamehlo, ngakumbi ngoncumo, oko kunokuthetha ukuba loo mntu unomdla kuwe.
Ukunyuka kobungakanani babafundi kuthetha ukuba umntu uyayithanda into ayibonayo.
Amehlo aqaqambileyo anokubonisa umtsalane oqinileyo kwaye mhlawumbi nothando.
8 Imifanekiso ethandekayo ye-Anime Romance
Kwenzeka ntoni ngamehlo ngothando?
Umtsalane ubonakala ngokulula emehlweni omntu, kodwa uthando lunokungathandabuzeki. Amehlo ahambisa umyalezo woxabiso, ngokungathi umntu 'usela' kwiimpawu zakho ngamehlo, ukukhumbula ubuso bakho ngokungathi bayoyika bangakulibala ukuba bajonge kude kakhulu. Amehlo anokubonakala ngathi ahlekisiwe ngokungathi nobabini nihlekisile ukuba lonke ihlabathi aliqondi. Xa uzama ukufumanisaungaxelela njani ukuba umntu uyakuthandangokujonga emehlweni abo, khumbula ukuba uninzi lomntuulwimi lwamehloilungile kubuntu babo, ke lo gama umntu onentliziyo elula enokubonisa ukuhleka xa ejonga into ayithandayo, umntu onamandla angamgcina umntu omthandayo.
Ukujonga ngamehlo Iimpawu zothando
Ixesha kunye nobukhulu bokujongwa kunokubonisa uthando okanye uthando, kodwa ungaphazami ngokungabikho kokhangelo njengobungqina bokuba akukho mvakalelo apho. Ngapha koko, ezinye iinkcubeko zijongile xa ujonge kwaye ungajonganga luphawu lwentlonipho endaweni yomqondiso wokungabi namdla. Kwakhona, gcinani engqondweni ukuba abanye abantu abonwabanga ngokujonga ngqo emehlweni kwaye banokuthintela ukujonga kwabantu-nkqu nabathandekayo.
Khangela kumphefumlo womntu ngamehlo
Isizathu sokuba abadlali abaninzi be-poker banxibe iiglasi zelanga ngelixa bedlala amakhadi ngamehlo anokunika iingcinga kunye neemvakalelo. Ukuqhwanyaza nje ngamehlo okanye ukuqaqamba ngenxa yokufuma kwimibhobho yeinyembezi kungabonisa ukonwaba. Nantsi enye into onokuyifunda ngabantu ngokuqaphela amehlo abo:
Xa abantu benciphisa amehlo abo, oko kudla ngokuthetha ukuba abonwabanga, bayacekiseka okanye bacinywe ngumntu okanye yinto ethile.
Xa abantu becaphuka emntwini, baya kumjonga ngamehlo loo mntu. Ukukhazimla yindlela eyoyikisayo esetyenziswa zizilwanyana ezininzi ngokunjalo.
Xa abantu bengakwazi ukuhlala begxile kwaye bajonge ngamehlo nomntu abathetha naye, oko kuthetha ukuba abanikeli ngqalelo.
Ukuqhwanyaza komzimba ngokuthetha kunokuthetha ukuba umntu unento yokuyifihla. Oku kunokuba yinto elungileyo okanye embi. Ukubaumntu uyaxoka, he is most uwezekano to blink but a person will also blink if he / she is trying to hide that he hasukuthandana nawe!
Ukujonga phantsi kungangumqondiso wokungeniswa kunye nentlonipho kwezinye iinkcubeko. Ikwabonisa ukuthozama.
Ukubanakho ukujonga umntu emehlweni kuthetha ukuba uyazithemba.
Ngelixa amehlo esisalathiso esihle sokunconywa, kungcono ukuthatha imikhwa oyifumanayo emehlweni kwaye uyibeke kunye nolunye ulwimi-lothando-imikhondo. Ngale ndlela unoluvo olungcono ukuba umntu unomdla kuwe. Ewe kuya kufuneka ulumke xa usebenzisa kuphelaulwimi lomzimba njengophawu lothandokuba ekuphela kwendlela yokwazi ngokuqinisekileyo kukubuza.
Ngaphezulu Size Clothing Stores Autism Kanye Bantwana Special Occasion Decorating Ukutya Oku Empilo Iimeko Imifuno Igadi
into yokucoca inxeba lenja
yeyiphi iminyaka yobudala ethathwa njengemdala
Ungasusa njani ukubhaka kwigrisi
indlela yokwenza amakhandlela anuke ngakumbi
ukuzala inja eyindoda okokuqala